အငြင်းပွားဖွယ် တရုတ်မြို့သစ်နဲ့ ရွှေကုက္ကိုလ်ဒေသကို အစိုးရ ထိန်းချုပ်တော့မလား
a fella | 29/12/2020 | News | No Comments
ရွှေကုက္ကိုလ် ဒေသကို တပ်မတော် လက်အောက်ခံ BGF အနေနဲ့ အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ခွင့်ရလာတဲ့အခါ စီးပွားရေး လုပ် ကိုင်ခွင့်တွေလည်း ပူးတွဲပါလာခဲ့ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်မြို့သစ် စီမံကိန်းကြီးတခုကို တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်မှု Yatai International လုပ်ငန်းစုနဲ့ BGF ရဲ့ ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
စီမံကိန်း သဘောတူညီမှုအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တရုတ်လုပ်ငန်းစုဘက် စိုက်ထုတ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ကို တရုတ်လုပ်ငန်းစု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ BGF ရဲ့ ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေမှာဖြစ်တယ်လို့ ချစ်လင်းမြိုင် ကုမ္ပဏီဘက်က ပြော ထားပါတယ်။
တရုတ်လုပ်ငန်းစု အနေနဲ့ မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မြေဧက တွေပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဟိုတယ်၊ အိမ်ရာ၊ ကာစီနိုရုံ၊ အပန်းဖြေစခန်း အစရှိသဖြင့် တည်ဆောက်ဖို့အထိ ရည် ရွယ်ထားပါတယ်။
အစိုးရဘက်ကတော့ မြေ ၆၂ ဧက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အထဲကမှ ၂၅ ဒသမ ၅ ဧကပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂၂ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ (Villa) ဆောက်လုပ်ရန်သာ ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့် အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို လျစ်လျူရှုပြီး အဆောက် အအုံများစွာကို ဥပဒေကျော်လွန်ကာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေသတွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပါဝင်ပြီး ဥပဒေကျော် လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ တရုတ်နိုင်ငံသား အများအပြား ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့ လောင်းကစား လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာ စီမံကိန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ ဒေသခံများက အစိုးရထံ တောင်းဆိုခဲ့ ကြပြီး အမေရိကန်အခြေစိုက် (US. Institute of Peace) အဖွဲ့အစည်းကလည်း တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ တရုတ် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်နေကြောင်း ဖော်ထုတ်တင်ပြမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ ရွှေကုက္ကိုလ်မြို့သစ်ကဲ့သို့ စီမံကိန်းတွေဟာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ် လို့ ကိုင်တွယ်ရ ခက်ခဲနေကြောင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ဇူလိုင်လအတွင်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့ပြီး စီမံကိန်း စိစစ်ရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ အထိတော့ ဥပဒေမဲ့ ဆောက်လုပ်မှုတွေ၊ အငြင်းပွားဖွယ် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို အစိုးရဘက်က တစုံတရာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်းမရှိသေးဘဲ ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင်ကျေးရွာကိုသာ မြို့အဆင့် တိုးမြှင့်ရေး ကြိုတင်ဆောင် ရွက်ချက်တွေကို တွေ့မြင်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြဝတီမြို့နယ် ဒေသခံတွေကြားမှာတော့ ဒီလို ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ BGF တို့ကြား စီမံကိန်းနဲ့ ပတ် သက်လို့ တစုံတရာ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုအဖြစ် ခန့်မှန်းနေကြသလို မြို့အဆင့်တိုးမြှင့်ပြီး BGF အပေါ် ပိုမိုလုပ်ပိုင်ခွင့် ပေး တဲ့ အနေအထား ရောက်ရှိလာမှာကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒေသတွင်း တရုတ်ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်လျက်ရှိ ရာမှာ အရေးပါတဲ့ နယ်စပ်ဒေသအား BGF လက်နက်တွေကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ခွင့် ဆက်လက်ပေး မထားလိုတဲ့ သဘောထားအဖြစ် ရှုမြင်သူများလည်းရှိကြပြီး အငြင်းပွားဖွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိနေတဲ့ နေရာအား အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး အောက် ပြန်လည် ထည့်သွင်းသည့် လုပ်ဆောင်မှု အဖြစ်လည်း သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
မြို့အဆင့် တိုးမြှင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေအရ အချက်၂၁ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီရမှာဖြစ်ပြီး ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ အမှိုက်ပုံ၊ သုဿာန်မြေ အစရှိသဖြင့် သတ်မှတ် အကျယ်အဝန်း တည်နေရာတွေ ရှိရမှာဖြစ်သလို အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တွေဖြစ်တဲ့ အုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အပါအဝင် ဌာနဆိုင်ရာရုံး ၁၁ ရုံးခန့် အခြေ စိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေပြင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ “ရွှေကုက္ကိုလ်က ကိုက်ညီပါတယ်၊ သူက တော်တော်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်း ရှိပါတယ်။ စုကလိ၊ ဝေါလေတောင်မှ အဲဒီလောက် စည်ကားမှု မရှိဘူး။ မြို့အဆင့်က ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တိုးမယ်၊ မတိုး ဘူးကတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်က ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။ မြို့ဖြစ်လာရင်တော့ မြို့အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေး ထိုင်ရမှာပေါ့၊ ရုံးစိုက် မယ့်နေရာ အနေအထားလည်း ကြည့်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ မြဝတီမြို့နယ်အောက်မှာတော့ မြို့အဆင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝေါလေမြို့နှင့် စုကလိမြို့တို့ ရှိနေပါတယ်။
“ဝေါလေမြိုင်နဲ့ စုကလိမြို့ ဖွဲ့ထားရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြည့်ပြီး မြို့ဖွဲ့ချင်လည်း ဖွဲ့မယ်၊ ရွာဖွဲ့ချင်လည်း ဖွဲ့မယ်၊ ဒါကတော့ အစိုးရ အစီအစဉ်ပဲ၊ ပေးနိုင်တဲ့ Facility ကြည့်ပြီးဖွဲ့ရတာ” လို့ မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောပါတယ်။
အကယ်၍ ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင်အား မြို့အဆင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါက မြဝတီမြို့နယ်အတွင်း တတိယမြောက် မြို့ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အစရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများမှာလည်း လူထု အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြဝတီမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦး စိန်ဗိုလ်က ပြောပါ တယ်။
“မြို့ဖြစ်လာရင်တော့ ကဏ္ဍအလိုက် အဆင့်တိုးမြှင့်မှုတွေ လုပ်ရမှာပေါ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ရှိပြီဆိုရင် BGF က လည်း သူ့တာဝန်သူ ရှိမှာပေါ့။ သူကလည်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာပဲလေ။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဖြစ်သွား မှာပဲလေ။ အမှန်ကတော့ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားက လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်မှာပါပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် သူ့ အလုပ်သူလုပ်၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်၊ သီးခြားစီ ဖြစ်သွားမှာပါပဲ” လို့ ဦးစိန်ဗိုလ်က သုံးသပ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့သုံး အဓိကရုဏ်းဖြိုခွဲရေး ရေဖြန်းကားကြီးအကြောင်းတစေ့တစောင်း ( ❗ဗဟုသုတရစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ ❗ )
ထိုင်ဝမ်သို့ စစ်လက်နက်များရောင်းချမှု ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံအား တရုတ် သတိပေး ( ထိုင်ဝမ်က အမေရိကန်လက်နက်နဲ့ပြန်ဆော်မယ့် ဆိုတော့လည်း သာကောတို့ သွေးရူးတန်းရူး ကိုဖြစ်လို့….)
နာမည်ကျော် ရုရှားတို့ ၏ မောင်းသူမဲ့ ဒရုန်း နှင့် ဒုံးပျံများအကြောင်းတစေ့တစောင်း